JK Rowling: Nwanyị cliché n'okpuru pseudonym Robert Galbraith. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
JK Rowling na-apụ site na ndị nchọpụta nke narị afọ nke XNUMX n'okpuru aha nzuzo Robert Galbraith.
JK Rowling bu ihe omuma akwụkwọ akụkọ ojii, bipụtara na Robert Galbraith, onye na-akpọ aha ya, na-enye anyị ka anyị Ọgba Cormoran: onye nyocha siri ike, onye bụbu onye agha, onye na-akụ ọkpọ, jọgburu onwe ya ma sie ike n'agbanyeghị na o nweghị ụkwụ n'okpuru ikpere. Nwoke siri ike nke na oge ọzọ ga-eyi okpu na sịga na-adịgide adịgide n'akụkụ ọnụ ya.
Rowling na-ewebata anyị n'akụkụ ya, otu nzọ n'azụ, na ndu nwanyi, Robin, onye na-ekenye ikpe na ọfịs na Strike, mana yana atụmatụ nke ụmụ nwanyị iri ise: Robin, kpebisiri ike, na-adịgide adịgide, na-esighi ike ma chọọ nchebe.
Cormoran Strike depụtara Ellin, onye nde nde mara mma ma nwee ọganiihu, Robin ya na Maxwell, bụ nwatakịrị anaghị asọpụrụ ọrụ ya ma chọọ ka ọ rara onwe ya nye ọrụ ka mma na nke ka akwụ ụgwọ ya. Robin bụ agwa mara mma nke nwere agwa mara mma, onye nwere ọgụgụ isi na onye ọgụ, mana ọ chọrọ ma nwee mmasị na Strike n'ụzọ dị egwu na mmekọrịta chiri anya, na ọ na-ewepụ agwa ahụ na nwanyị na-alụ ọgụ maka ebe ya, n'okwu nha anya, n'etiti ọha mmadụ. XXI narị afọ.
Ebu, n'akụkụ aka nke ọzọ, ọ nọ nso Philippe Marlowe karịa ndị nchọpụta nke oge a, dị anya na onye Brunetti maara nke ọma na-enwe mmasị na nwunye ya, Paola, onye ọ na-amasị gastronomic na akwụkwọ ụtọ. N'ime usoro a, anyị maara Cormoran Strike, ezigbo oge ọ bụ nwata na nne riri ahụ na nna na-eme ihe ike, onye na-eme ihe ike na onye umengwụ. Nzọụkwụ a na-egosi agwa Strike, anyị maara ọtụtụ ihe banyere ya karịa ka anyị maara banyere ndị nchọpụta mbụ nyere ndụ na akwụkwọ mpụ ahụ, mana nsonaazụ yiri nke ahụ, n'ihi na ahụmịhe ya anaghị ahapụ ọnya mmetụta uche ọ bụla n'ime ya, Strike abụghị egwu, bụ ezigbo mmadụ, siri ike ma na-echekwa, onye mgbe ụfọdụ, na-achọghị, ọ dị mfe itinye na ihu nke Humprey Bogart dị ka Sam Spade ma ọ bụ Stacy Keach na usoro telivishọn a na-agaghị echefu echefu Mike Hammer.
Na Robin, onye tara ahụhụ n'ike mgbe ọ ka nọ na kọleji ma gbalịsie ike imeri ya, n'agbanyeghị na ọ chọghị obi ike gụsịrị akwụkwọ mgbe mwakpo ahụ gasịrị, o siri ike iji ya tụnyere ndị nyocha dịka Kinsey Milhone, Petra Delicado, ma ọ bụ hapụ ya na mkpụrụedemede dịka Lisbeth Salader. Rowling na-ewulite onye nyocha kwesiri ekwesi nke XNUMXs ọha mmadụ, dị nso na odeakwụkwọ zuru oke nke Philippe Marlowe karịa onye na-achọpụta ihe N'ịbụ onye ọdachi dakwasịrị, ọ na-eche ndị omempụ kachasị ụjọ dị ka Amaia Salazar.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Black akwụkwọ » JK Rowling weghachitere nwanyị cliché n'okpuru pseudonym Robert Galbraith
Kedụ maka Ana, ka m kọọrọ gị na akwụkwọ ndị a masịrị m nke ukwuu, o nwere ihe dị na ha nke jidere m nnọọ. Agbanyeghi na ekwenyere m na nyocha agwa gị, maka m Robin na-enye ọtụtụ ihe karịa ihe nkatọ na-ekpughere, opekata mpe na njedebe ikpeazụ o gosipụtara omume ya kachasị iche, ọ bụghị onye nyocha, ọ na-amalite itinye aka na ya, onye nyocha bụ ihe nrọ nwata na-amalite ịdị ndụ, na-atụnyere ya na onye nyocha n'oge a agwa ya adịghị ka ọ dị mma, na mgbakwunye, ọ maara nke ọma na nraranye kpuru ìsì ya nke Strike abụkwaghị ya na m Ekwenyesiri m ike na nsogbu ndị ọzọ na usoro Strike ga-esi n'aka gị. Kama ịkọwa ya dị ka onye nyocha nke ọha mmadụ 40, ana m ewere ya ka ọ bụ nwanyị XNUMXst narị afọ nke, dịka ọtụtụ ndị ọzọ, nọ n'ọhụụ nke ichefu ịbụ nwanyị zuru oke ịchọta onwe ya. M ga-echere ikpe ya ikpe dị ka onye nyocha ma ọ dịkarịa ala ruo mgbe akwụkwọ na-esote 😉
Ndewo Magali: Achọghị m akwụkwọ Robert Galbraith, ọ bụ ezie na m na-eme ihe n'eziokwu: Ahụghị m ha n'anya, mana lee m, onye na-agụghachi ugboro ugboro, na Ọfịs Ọjọọ mechara. M hụrụ n'anya kpochapụwo akwụkwọ na ndị siri ike ụmụ nwoke na ọrụ nke onye tutuntu; Philippe Marlowe ma ọ bụ Sam Spade dị ukwuu ma ọ na-amasị m ịgụgharị ha site n'afọ ruo n'afọ, dịka izu ole na ole gara aga achọtara m otu ikpe Perry Mason furu efu na shelf m ma nwee nnukwu ọ toụ ịhapụ ọtụtụ awa na ya ọzọ. Taa ụdị ojii agbanweela, dị ka ụdị niile, na ihe odide ahụ dị ugbu a, dị ka ndị ezigbo mmadụ nke ọha mmadụ anyị bi na ya taa. Dika akwukwo Agatha Christie, ha na telegram na ndi oru nyocha taa jiri WhatsApp na email. Taa ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ ndu n'otu ọkwa dị ka ụmụ nwoke na ọtụtụ ndị edemede na-etinye aka na ya. Akwụkwọ akụkọ atọ nke Rowling na ụdị noir na-echetara m nke ochie karịa nke oge a, n'ihe niile, ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke na nke ahụ adịghị njọ, ọ bụ ụdị. Ihe na-eju m anya bụ nhọrọ a nke onye edemede nwere ahụmịhe nke onwe ya nke JK Rowling na echere m na eziokwu nke ibipụta akwụkwọ n'okpuru aha nwoke bụ ihe dị mkpa banyere ụdị ọ họọrọ maka usoro ojii ya. N'ezie, a na m ege gị ntị, ma lee m ga-anọ, na-adị njikere ịgụ nkeji nke anọ. Anyị ga-ahụ ka Robin si agbanwe n'ihi na ikekwe, dịka ị na-ekwu, ọ tozuru etozu dịka mmadụ na dịka onye nyocha na ihe ịtụnanya na-eche anyị. Obi ga-adị m ezigbo ụtọ ma ọ bụrụ otu a. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ gaghị adịrị m ụtọ, mana nke ahụ agaghị eme ka ọ ka mma ma ọ bụ ka njọ dị ka akwụkwọ akụkọ.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịgụ isiokwu ahụ, maka inye echiche gị, maka ịza ajụjụ, yana ịchọpụtara anyị ụzọ ọzọ iji lelee akụkọ ahụ.